Cabdi Maxamed Ciye-oo bahda isboortiga ay ugu yeeraan Cabdi dheere- ayay taariikhdu xusaysaa inuu ka mid ahaa ciyaaryahannadii iyo tababarayaashii ugu qiimaha badnaa ee soo mara ciyaaraha kubbadda koleyga ee dalkeena Soomaaliya. – Cayaaraha dunida
Goorma ayaad billowday Ciyaaraha? Yaase kugu dhiirrigaliyay ?
Ma jireen noocyo kale oo isboorti oo aad ka qayb-gashay ?
Cabdi Dheere: Haa waa jireen siiba ciyaaraha kubbadda cagta iyo ciyaaraha fudud ”Athletics” oo aan ka qayb-qaatay xilligii aan dhiganayay dugsiga Jamaame…… Runtii waxaan aad u sii jeclaa ciyaaraha fudud oo aan oran karo waa hooyadii Isboortiga taasoo aan sabab uga dhigayo haddii uu ciyaaryahanku awooddiisa iyo awoodda wada shaqaynta jirkiisa ay wanaagsan yihiin waxaa ay sahli kartaa inuu ka qayb-qaato nooc kasta oo ciyaareed oo uu doono, ilaa haatan aad baan u jeclahay daawashada ciyaaraha fudud, hase yeeshee xilligaasi talooyinkii ay ii soo jeediyeen labadaasi macallin ayaan qaatay oo aan u go’ay ciyaarta kubbadda koleyga.
Ma ka qayb-gashay tartamadii ciyaaraha gobollada ?
Cabdi Dheere: 1971 kii ayaan ka qayb-galay, waxaana ay ahayd waqtigaasi mid u furan ciyaaryahanka heerka 1aad Iyo kan gobolka ka yimaada…hase yeeshee markii dambe waa la sharciyeeyay oo lama oggolayn in ciyaaryahan heerka 1aad uu ka qayb-galo tartamadii ciyaaraha gobollada. Sidoo kale iyaduna waxaan ka qayb-galay tartammadii ciyaaraha dugsiyada.
Cabdi Dheere: waxyaabaha xusuusta gaarka igu reebay oo ilaa haatan maskaxdayda ay soo goconayso ayaa ahayd iyadoo ay na soo mareen ciyaartooy faro badan oo qiimo badnaa kuwaasi oo xirfaddoodii ciyaareed aan ku tilmaami karo “ Hibo Eebe” Sida: Bashiir Foxs, Qardhaas, Afweyne, Bile Warsame, Cabdulqaadir Shiikha, Axmed Xaaji Nuur, Gees, Maxamuud, Saciid Qorsheel, Cabdalla Dheere, iyo ciyaartooy fara badnaa oo aan halkan ku soo wada koobi karin…waxaan qabaa ciyaartooydani haddii adduunyada kale loo furi lahaa inay wax-tar wayn u yeelan lahaayeen dalka Soomaaliya, dunidana ay magac wayn ka kasban lahaayeen.
Kooxdaadii kubbadda koleyga ee Jeenyo” LL.PP” wax guulo ah ma gaareen intii aad u ciyaaraysay ?
Maxaa ka mid ahaa guuldarrooyinkii kuugu xumaa oo ku soo intii aad ku dhex jirtay kooxdaadii jeenyo & xulka qarankaba ?
A) 1970 -1978 guulo faro badan oo uu inoo horseeday Macallinkeennii Ibraahim Xasan oo ku magac dheeraa UGO ayaa jiray waxaana ku guulaysanay koobabkii ugu faro badnaa ee horyaalka iyo jeneraal daa’uud.
B) 1978 kii markii kooxdii Jeenyo ay kala tageen ,1980 kii Tababare ayaan noqday,1 sano iyo bar gudaheeda waxaan ku soo dhisay dhallinyaro yaryar oo aan soo gaarsiiyay ciyaaraha semifinalka. Waxaana sharaf ii ahayd in kooxdii aan gacanta ku hayay ay ku guulaysteen 4 Horyaal ah iyo 1 koob oo Jeneraal daa’uud ah taasoo aan filayo inuusan jirin tababare gaara heerkaasi
Marka aad cabirto ra’yigaaga sidee lagu horumarin karaa isboortiga Soomaaliya guud ahaanba?
Cabdi Dheere, inkastuu ku nool yahay waddan shisheeye oo aad uga fog dalkii hadana weli kama jiifo soo saarista iyo abuurista caruur da’yar oo Soomaaliyeed oo mustaqbalka wax tarta dalkeeni hooyo. Cabdi wuxuu hada tababare iskaa wax u qabso ah u yahay caruur da’yar oo ku nool dalka Canada magaaladiisa Toronto.
Akhristayaasheena qaaliga ahoow waxaa intaas inoogu dhamaaday wareysigii xiisaha lahaa ee aan la yeelanay macalin Cabdi Maxamed Ciye (Cabdi dheere). Waraysigeena kan ku xiga waxaan isna ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah xidigihii kubadda cagta dalkeena soomaray 50 meeyadii oo lagu magacaabo Cumar Abuukar Maxamed (macalin Cumar ), oo macalina u ahaa naadigii BATROOLKA ee kubadda cagta. Waxaan filayaa in ay dad badani horay magaciisa ka garteen. Ha moogaanina dhawaan.